प्रधानमन्त्री पुत्र प्रकाशले सेल्फि खिच्दा टाउको लुकाउने को हुन् ती युवती ?
ARCHIVE, POLITICS » प्रधानमन्त्री पुत्र प्रकाशले सेल्फि खिच्दा टाउको लुकाउने को हुन् ती युवती ?
काठमाडौँ - यसैपनि बेलाबेलामा विवादित भइनै रहन्छन् प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहाल । त्यस्तै भएको छ यसपाली पनि । छोरी रेणु दाहाललाई निर्वाचन जिताउन प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लिए चितवन गएका बेला प्रचण्डपुत्रले खिचिको सेल्फीलाई लिएर यातिब्ला सामाजिक संजालमा निकै चर्चा छ।
उनले खिचेको सेल्फिमा दाहाल देउवा र उनी देखिएका छन । तर उनीसँगै सिटमा रहेकी एक युवतीले भने टाउको लुकाएकी छन् । बेला बेलामा युवतीहरुसँग नाम जोडिने गरेका प्रकाश दाहालको यो फोटोले पनि अरुलाई शंका गर्न बाध्य बनाएको छ । सबैको मनमा प्रश्न उठेको छ को हुन ति टाउको लुकाउने युवती ?